Inkqubo yethu-Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
Inkqubo yomyalelo wesampula: Umyalelo - izinto zelungu kuhlalutyo lwenkqubo - ukuhlanjululwa ngokomgangatho wombuzo wemfuno, ukuthenga izinto eziphathekayo, ukuhambisa izinto eziphathekayo kwindawo yokugcina impahla (ukuhlolwa komgangatho, uvavanyo) kwaye ngexesha elifanayo ukwenza imveliso - zama ukusika (isikhunta) - - izinto ezisikiweyo --zithako zolawulo lwezinto (inxalenye ivavanya ubungakanani bovavanyo, ukuchazwa, njl njl), imveliso mayiveliswe, ipakishwe (ukuhlolwa kwemveliso ngaphambili, iimveliso ezigqityiweyo uhlolo, uhlolo olupheleleyo lweemveliso ezigqityiweyo) -- imveliso kwindawo yokugcina impahla (ukuhlolwa kwesampulu ngomhloli womgangatho) -- ukuthunyelwa
Inkqubo yemveliso eneenkcukacha
Kwafika izinto eziphathekayo
Ngokutsho kwemathiriyeli yahlulwe kwizinto eziphambili, izinto ezincedisayo, izinto zokupakisha, ukugcinwa kwiindawo zokugcina ezintathu ezahlukeneyo, indawo yokugcina impahla inomgcini-venkile onoxanduva lokulawula nokulawula. Emva kokuba zonke izixhobo zifikile kwindawo yokugcina impahla, umhloli womgangatho uya kwenza uvavanyo lomzimba kunye neekhemikhali kwimathiriyeli ngokweemfuno zomthengi. Kubandakanya uvavanyo lokukhawuleza kombala, uvavanyo lokutshiza ityuwa, uvavanyo lokuncipha, njl njl. Izinto eziphathekayo zinokungena kwindawo yokugcina impahla kuphela emva kokuphumelela ukwamkelwa.
Sineendawo zokusebenzela zokusika ezimbini, enye yeyelaphu, enye yeyekhadibhodi kunye nezinye izinto ezichanekileyo. Zonke iimveliso ziya kulungiselela ukusika ukubumba ukuveliswa kovavanyo, ngokuhambelana nemveliso yovavanyo lweentlanganiso zangaphambi kokubeleka. Isebe lomgangatho kunye nesebe lemveliso lixoxa ngeyona ndlela ingcono yenkqubo ngokovavanyo oluqhutywe ukuphepha iingxaki zomgangatho. Imveliso yovavanyo ifanelekile, phambi kokusikwa kwemathiriyeli eninzi ngokusesikweni.
Isebe loLawulo lweMathiriyeli yeMveliso
Zonke izinto zokufunda ziya kufika kwisebe lolawulo lwempahla phambi kokuba zithunyelwe kumasifundisane. Umlawuli wezinto eziphathekayo uya kubala ubuninzi bezinto eziphathekayo, kwaye umlawuli wekhwalithi uya kukhangela kwaye ahlolisise ubungakanani kunye nomgangatho wezinto eziphathekayo. Emva kokuphumelela ukuhlolwa, izinto eziphathekayo ziya kuthunyelwa kwiworkshop. Umlawuli wezinto eziphathekayo ukhupha izinto ngokuhambelana neshedyuli yokuvelisa.Emva kokuba izinto zifike kwiworkshop, abasebenzi bolawulo lweeworkshop baya kukhangela kwaye baqinisekise izinto eziphathekayo.
Ngaphambi kokuveliswa kobuninzi, iworkshop iya kuvelisa iisampulu zesaphetha zokuqinisekisa umthengi, kwaye imveliso ilungiselelwe kuphela emva kokuqinisekiswa komthengi. Emva kokufumana izinto eziphathekayo, umphathi weworkshop uya kuhambisa izinto kubasebenzi ojongene nenkqubo nganye ngokwenkqubo yokuvelisa. Inkqubo nganye iya kwenza isiqwenga sokuqala sokuqinisekisa, abasebenzi bekhwalithi kunye nabasebenzi bezobugcisa baqinisekisa isiqwenga sokuqala, ukuqala ngokusemthethweni kwemveliso. Umgca ngamnye wemveliso uya kuba nabasebenzi abasemgangathweni bokukhangela indawo kunye nokuhlolwa kwenkqubo nganye ukuphepha iimveliso ezigqityiweyo kwimveliso. Umgca wemveliso wonke ngumsebenzi wokuhlanganisana. Isebe lokupakisha lijongene nokupakishwa kweemveliso ezigqityiweyo, kwaye ipakethe nganye ixhotyiswe ngomhloli womgangatho wokuhlolwa okupheleleyo kweemveliso.Emva kokupakishwa kwemveliso, iya kuthunyelwa kwindawo yokugcina imveliso egqityiweyo, umgcini wendawo yokugcina impahla ukubala ubungakanani ngaphambi kokugcinwa kwempahla. .Kuyaphawuleka ukuba sineendibano zocweyo ezintathu zokuvelisa, i-workshop ye-frequency ephezulu, i-workshop yokuthunga, i-workshop yemveliso yeglue, inkqubo yokusebenza iyafana.
Iimveliso ezigqityiweyo kwindawo yokugcina impahla
Iimveliso ezigqityiweyo zithuthwa zisiwe kwindawo yokugcina impahla ngabasebenzi beworkshop, kwaye umgcini wendawo ubala ubuninzi. Emva kokugcinwa kwempahla, umhloli wemveliso ogqityiweyo uya kujonga imveliso ngokwe-AQL.Ngexesha elinye lokwenza ingxelo yemveliso, phawula imveliso, yahlule iimveliso ezifanelekileyo nezingafanelekanga, iimveliso ezingafanelekanga ziya kubuyiselwa kwindawo yokusebenzela ukuze ziphinde zisebenze. Ukuthunyelwa kunokulungiswa kuphela emva kokufumana ingxelo yemveliso efanelekileyo evela kumhloli womgangatho.